यौन कथा:आँखीझ्यालबाट देखिएको वस्त्रहिन छाँया
by Soni Sharma | Updated: 26 Jun 2019
हामी तीनजना साथीहरु एउटै कोठामा त्यो पनि भान्छासहित रहदै आएका थियौं। त्यो देखेर त्यहि घरमा तल्लो तलामा भाडामा बस्ने दिदीले हाम्रो अटेसमटेसको बसाईलाई मनन गरेर हो वा मजाक गरेर भन्नु हुन्थ्यो ‘कहिलेकाहीँ त्यता साँघुरो भए सुत्न मेरोतिर आएपनि हुन्छ नि नितेशबाबु।कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्दैन, आफ्नै सम्झे हुन्छ,’ हामी त्यो घरमा डेरा सरेको करीब एक महिना हुदैथियो।ती डेरावाली दिदीसंग मेरो राम्ररी चिनजान र दोहोरो बोलीचाली समेत भएको थिएन।तर उनी हाम्रा हरेक व्यवहार र चालचलन बुझेर बसेको उनका कुराले बताउँथ्यो।उनी मेरो मात्र होईन मेरा साथीहरुको समेत हरेक कुराको निग्रानी राख्थिन्। बिहान कतिखेर उठ्छन् कतिखेर खाना खान्छन् कतिखेर निस्कन्छन् कतिखेर कोठामा आउँछन् कतिखेर सुत्छन् आदि ईत्यादि ।
हामी तीन जना साथीहरु मध्ये अरुसंग उनी खासै बोल्दैनथिईन्।उनले मलाई नै किन साँघुरो भए सुत्न मेरोतिर आएपनि हुन्छ भनेर भनीन् उनको त्यो भनाइ वास्तवमै अर्थपूर्ण थियो।त्यो आमन्त्रण त्यति सहज रुपमा लिनु उचित थिएन, उनले मलाई किन त्यसो भनिन् ? निकै दिनसम्म म सोचमग्न भएँ।तर ठ्याक्कै अर्थ्याउन सकिन त्यो आमन्त्रणको आशय ।
उनको र मेरो कोठमा जाँदा आउँदा तल-माथि गर्दा देखादेख हुन्थ्यो र उनी मलाई देख्ने बित्तिकै मसक्क मस्केर केही न केही निहुँ पारेर मेरो शरीर छुन भ्याउँथिन् ?’म, फिस्स हाँसेर पञ्छिन खोज्थें तर उनी कुनै न कुनै निहुँमा छोईहाल्थिन्। एकदुई दिन त साह्रै अप्ठेरो लाग्यो तर बिस्तारै बानी जस्तै भयो।उनलाई भेट्यो कि कुनै न कुनै बहानामा उनलाई छुने म मा पनि चाहाना बढ्न थाल्यो । पेशाले म भर्खरै जागिर खाएको नोकरीवाल हुँ । त्यो नोकरीले मेरो औकात के कति देखाउँछ, त्यो मलाई थाहा छैन । तर, शहरमा मेरो सम्पर्क र सम्बन्ध धेरै किसीमका र अलग अलग परिवेशका मान्छेहरुसंग अलग अलग महत्वका साथ कायम छ ।
हाम्रोमा दिनहुँ हाम्रा साथीहरु आइरहन्छन् । उनीहरुसँगको भेटघाट र कुराकानीलाई बडो महत्वपूर्णका साथ लिने गरेका छौं हामीले । डेरावाली ती दिदीले हाम्रो पारा देखेर मलाई आफूकहाँ बोलाएकी पनि हुन सक्छ । या अरु केहि ! अर्थात एउटी नारीका लागि पुरुष सामिप्यता ।
दिदी मभन्दा करीब दर्जनै वर्षले जेठी थिइन् । तर पनि उनी मेरै उमेरकि लाग्थिन्। त्यसैले पनि मैले उनलाई दिदी भन्दा कुनै आपत्ति गर्ने अवस्था थिएन । तैपनि दिदी र म मा मै पो जेठो मेखिन्छु त दिदी त भर्खरकी देखिनु हुन्छ भन्दा मसक्क मस्केर अँ भाई पनि मुहारमा बत्तिस मुजा परि सक्यो । भाईले तरुनी देखेर के गर्नु भनेर कसैले नदेख्ने गरि झिमीक्क आँखा मार्न भ्याईहाल्थिन्।
दिदीको यो रवैयाले मेरो मनमा बिचलन ल्याईदिएको थियो।म अफिस जाँदा होस वा अफिसबाट फर्किदा भर्याङ् चढ्दा होस या ओर्लदा उनको कोठमा चियाउन थालिसकेकै थिएँ। मेरो यो चाला डेरावाली दिदीले चाल पाईसकर्की थिईन सायद ।त्यहि भएर होला सायद उनी म निस्कने वेलामा बिना भित्री पहिरन केवल एउटा म्याक्सीमा भर्याङबाट देखिने ठाउँमा सेता र पोटिला केराका खाँबा झै लाग्ने तिघ्रा र गुँडबाट उड्न तयार भएकँ परेवाका जोडी झै लाग्ने आधा वक्षस्थल देखाएर बसेकी हुन्थीन्।
म उनले थाहा पाउलिनकि भने झैं गरेर चोरी चोरी हेर्थे भने उनी नथापाए झैं गर्थिन्।त्यतिमात्र होईन मैले चियाएको चाल पाएसी आफै एक्लै मडारिएर कहिले आफ्नो छाती आफै चलाउथिन त कहिले थाईमा चिलाए झैं गरेर मलाई देखाउँथिन्। अचेल डेरावाली दिदी मलाई देख्नेबित्तिकै आँखा गाडेर नियाल्थिन् । माया प्रेमको भावमा नजिक आउन खोज्थिन्।कोठामा बोलाउँथिन् र खाजा र खानाका लागि समेत हार्दिकताका साथ आग्रह गर्थिन् । म पन कुनै न कुनै बहानामा उनको कोठामा जाने गर्थें ।
दिदीका ती सबै व्यवहारले मलाई निकै नजिक तानी सकेको थियो । दिदीले कोठाभरि यौन उत्तेजनाका अर्धनग्न तस्बिरहरु सजाएको देख्दा म त्यसै त्यसै पग्लन्थें । मुटुको धड्कन बढ्थ्यो। हातगोडा मातले थर्थराउँथे । म दिदीसंग नजिकिने बहाना खोज्थें।दिदी चाहान्थिन मैले नै प्रस्ताव गरोस हर कुराको मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो तर म सक्दैनथें तरपनि म काँतर मान्छे पटक्कै होइन । ठूल्ठूला मान्छेसगका अन्तर्क्रिया होस या आफ्ना प्रस्तुतीहरु ठुल्ठुला मासमा प्रस्तुत गर्दा म रत्तिभर डराउँदिनथें। तर, दिदीको अगाडि किन म गरुडको छाया परेको सर्प झैं हुन्छु म आफैंलाई अनौठो लाग्छ ।
ती डेरावाली दिदीको कोठामा सधैंजसो लोग्नेमान्छेहरुको आउजाउ चलिरहन्थ्यो । आउने-जाने सबैसँग दिदीको आफ्नै प्रकारको नाता-सम्बन्ध कायम रहन्थ्यो । म निकै आश्चर्यमा पर्थेँ, किनकि दिदीको संगत आईमाईहरुसंग भन्दा लोग्नेमान्छेसँग बढी किन छ ? मैले आफैलाई प्रश्नगर्थें ।दिदीको यस्तो चालादेखेर साथीहरुले समेत दिदीलाई धन्दावाली आइमाई र मलाई उसंग जोगिएर हिड भन्ने गर्थे तर मलाई भने उनी धन्दावाली हो भन्ने पटक्कै लागेको थिएन।
दिदी हरेक बिहान उठ्नेबित्तिकै नुहाउँथिन् । सोह्र शृंगार गरेर चिटिक्क पर्थिन् । उनको शरीर चौबीसै घण्टा मगमगाइरहन्थ्यो । तर, उनको दिनचर्या कोठाभन्दा बाहिर बित्दैनथ्यो । त्यसमा अचम्म लाग्थ्यो मलाई । एकदिन म अफिसबाट चाँडै नै फर्किएँ ।भर्याङ उक्लदै गर्दा उनको कोठमा गुनगुन आवाज सुने । मैले चाल मारेर भर्याङको आडमा रहेको आँखीझ्यालबाट चियाएँ।म हेरेको हेरेई भएँ आँखीझ्यालको पर्दाभित्र म घामबाट आएकोले एउटा निर्वस्त्र छाँया देखें । छाँयासंग दुई परुष छाँया,मलाई त्यस्तै लाग्यो,खेलिरहेका थिए।त्यहि छाँयाले नै जस्तो लाग्यो एउटा अनौठो आवाज सुस्तरी निकालीरहेको थियो।त्यस्तो आवाज कहिलेकहि मैले त्यही कोठाबाट यस अघि नि सुनेको थिएँ त्यतिखेर म त दिदीलाई सञ्चो भएनछ कि पो भन्ने सोचेको थिएँ तर त्यो आवाज त ओहो ! त्यो अस्पष्ट छाँयाले मेरो शरीरमा भाईब्रेसन भइरहेको थियो । दिदीकोमा किन थरीथरीका लोग्नेमान्छे आइरहन्छन् ? बल्ल बुझें । साथीहरुले भने झैं दिदी धन्दावाली हुन भन्नेमा मेरो अब दुविधा रहेन।
भोलीपल्ट बिहान आँगनभरि गाईंगुईं ठुलै हल्लाले म बिउँझिएँ। आँगनभरि खचाखच मान्छे थिए।म बिउँझिएर बरण्डामा आउदै थिएँ एत्तक्कैमा प्रहरीको भ्यान आयो। प्रहरीहरु सरासर दिदीको कोठमा गए । त्यो देखेसी मलाई हिजोको दृश्य अगाडि आयो। मैले अनेक अनेक सोचें । तर हिजो को दृश्य त दिदीको कोठमा ग्याङ्ग रेप पो भएको रहेछ । दिदीलाई एउटा ग्रुपले उनकै कोठामा डरत्रास धम्की दिएर कब्जामा लिएर दिनभर रातभर ग्याङ्ग रेप गर्दा दिदी मरणासन्न हुन पुगेपछि त्यही ग्रुपको जसले रेप गर्न पाएन उसैले प्रहरीलाई खबर गरिदिएको रहेछ। त्यसपछि त्हा प्रहरी पुगेको रहेछ। प्रहरीले पुर्ण रुपमा नग्न अवस्थामा पलङमा हात बाँधिएको अवस्थामा रहेकी दिदीलाई उपचारका लागि गाडिमा हालेर लग्यो र उनको कोठालाई सिल गर्यो।
एउटी आइमाईमान्छे एकलो जीवनयापन गर्न साहस गर्छे समाजले उसलाई गिद्दे दृष्टीले हेर्छ र उसलाई बदनाम गर्न लागिपर्छ। उसलाई समाजमा बाहिर बदनाम गर्न खोजिन्छ र अदृष्यमा तीनै बद्नाम गर्न खोज्नेहरु उसलाई बिटुल्याउन दाउ खोजीरहेका हुन्छन्।डेरावाली दिदीको जीवनमा घटेको त्यो घटना त्यसैको एउटा प्रतिविम्ब थियो । दिदी त समाजको एउटा निमित्त पात्र मात्र हुन्। गिद्दे दृष्टी लाउने कुपुरुषको यहाँ कमी छैन भन्दा हुन्छ।
अघिल्लो दिन आफुले सारा कुरा देखेर पनि चुँक्क नबोली उल्टै दिदी प्रति अनेक नकारात्मक कुरा सोचेकोमा आफैलाई धिक्कारें। सायद त्यतिखेर मैले हारगुहार गरेको भए आवाज उठाएको भए सायद त्यो घटना हुन पाउँदैनथ्यो। प्रहरीले दीदीलाई अस्पताल लगेपछि म कोठामा गए र आफुले आफैलाई कोस्दै धिक्कार्दै आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँसु बगाईरहें मैले सोचे त्यो डेरावाली दिदीको स्थानमा मेरी दिदी भएको भए म के गर्थे ? यस्तै यस्तै प्रश्नमा जेलिएर बर्बराईरहें ।मैले बेलामा आवाज उठाउन नसक्दा त्यो घटना घट्न गयो ।
एउटी नारीको अस्मिसता लुटियो।म आफुलाई कहिले माफी दिन सक्दिन र मेरो यो कर्तुत माफी लायक समेत छैन।यस्तै अनेकन कुरा सोच्दै म मुर्छा परेंको कुरा साथीहरुले पानी छम्कीदै मलाई नितेश नितेश भन्दै बोलाउँदा पो झसङ्ग भएपछि थाहा पाएँ।